Foto-drafitr'asa | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny tena manan-danja indrindra momba ny karazana vary dia "Bogatyrskaya"
Ny plum dia tsy vitan'ny famokarana fitaovana ilaina, fa koa vokatra tena tsara. Noho izany, ny mpamboly tsirairay, izay mifidy hazo fihinam-boa ho an'ny zaridainy, dia maniry ny hampifaly azy amin'ny vokatra tsara araka izay tratra. Ny mpikaroka dia mikarakara fambolena. Izy ireo no nitondra ny karazana volon-doko manerantany ho an'ny tokantrano antsoina hoe "Bogatyrskaya".
Fomba hisafidianana toby fandefasana entana
Ho an'ny fikajiana ireo zavamaniry any amin'ny faritry ny faritry ny rindrina, ny rano avy amin'ireo lavadrano, tsanganana ary fitaovana voajanahary akaiky indrindra dia matetika ampiasaina, rehefa mametraka pandem-piraikitra anaty rano, raha ilaina. Saingy raha tsy mifandray amin'ny rafi-pamokarana rano ao an-toerana ny trano fonenana, dia ilaina ny mamaha ny olana momba ny famatsian-drano any amin'ny trano. Avy eo ireo tompon-trano dia mila mandinika ny fanontaniana momba ny fomba hisafidianana toby fitobiana ho an'ny trano manokana.
Ahoana no hanaovana fefy ho an'ny fandriana amin'ny tanany manokana?
Manana sombin-tany kely aho, tiako hamboly zavatra izay hamoa na hampifaliana ny maso. Saingy matetika ireo zaridaina sy zaridaina dia tsy mieritreritra loatra momba ny fametrahana ny fandriana. Izany no mahatonga ireo fefy ho an'ny fandriana azo avy amin'ny fitaovana tsy mety ary mijery tsy dia mendri-piderana.
Ny momba ny rotary ho an'ny traktera
Ny traktera, ny mini-tractors ary ny mpandrafitra dia manampy amin'ny fanatsarana ny fiainana ho an'ny tantsaha rehetra: avy amin'ny toeram-piompiana madinika ka hatramin'ny toeram-piompiana matanjaka. Ny tombontsoa lehibe indrindra amin'ny traktera dia ny fahafahana mampiasa fitaovana hikolokolo sy mifatotra amin'ny asa isan-karazany. Ohatra, amin'ny fametahana na fanomanana ny saha amin'ny famafazana dia mampiasa karazana masom-bary.
Kitapo plastika plastika ho an'ny fandrianao (miaraka amin'ny sary)
Na dia mametraka filaminana tsara ao amin'ny tranokalanao aza ianao, dia afaka manatsara sy manampy foana. Raha ny tena izy, ireo singa fiarovana dia mety tsy ao amin'ny trano ihany, fa ao amin'ny zaridaina ihany koa. Azo atao ny manamboatra hazo amam-bilia, toerana sy toerana manodidina ny hazo, ohatra, miaraka amin'ny fanampiana ny fefy. Misy karazana plastika samihafa mameno tsara ny atin'ny tranokalanao ary manampy amin'ny fananganana ireo zavamaniry, mba hahazoana antoka ny fitomboany sy ny fandaniam-potoana.
Inona no tokony hoeritreretinao hanorina toeram-pambolena alika
Tany am-boalohany, ireo alika izay nipetraka tao an-tokontany dia nanangana trano rihana ary namatotra azy ireo tamin'ny rojo. Ankehitriny, mihamitombo hatrany ny fananganana toeram-ponenana malalaka. Etsy andaniny, ny alika dia tsy afaka miditra amin'ny vatana vahiny izay miditra ao an-tokotany, ary amin'ny ankilany kosa dia tsy mitongilana eo amin'ny tendany ny rongony, ary ny mpiambina mahatoky dia afaka mifindra mankany amin'ny halavany.
Mitahiry vokatra amin'ny plastika plastika
Ny mponina an-tsokosoko, izay te-hamboly legioma ho an'ny hoavy ary hanao fikarakarana, dia miatrika ny olana amin'ny fametrahana maharitra ny fepetra. Raha tsy misy trano fidiovana dia tsy ampy. Na izany aza, tsy ny rehetra no manana fotoana sy fahaizana hanamboarana azy manokana, ary mila manatona ny fanampian'ny manampahaizana manokana. Vao haingana, ireo mpividy plastika vita amin'ny plastika vita amin'ny trano fatoriana dia efa malaza be.
Amboary ny trano fahavaratra
Matetika, ireo tompon-tany vaovao dia miatrika ny olan'ny tontolon-kevitra tsy misy dikany: ny lavaka, ny tehezana, ny lavaka ary ny toy izany. Olona maro no mihevitra fa hanao ezaka be sy fampiasam-bola be izy io mba hanesorana ny zava-misy. Amin'ity lahatsoratra ity dia ho hitantsika ny fomba hanamafisana ny tetika ao amin'ny firenena amin'ny tanany eo ambanin'ny zaridaina na eo ambanin'ny zaridaina, na sarotra na mora ny manao izany.
Fikarakarana sy fifantenana zavamaniry akondro
Ao amin'ny tranom-panjakana na any amin'ny firenena dia maro no manamboatra fitaovana fitehirizana. Mazava ho azy, amin'ity tranga ity dia tsy afaka manao ianao fa tsy kolontsaina izay ho fanorenana mahafinaritra ny trano. Amin'ity lahatsoratra ity dia hamaritra izay mety ho an'ny zavamaniry ny rano ho an'ny dobo sy ny vatan'ny rano hafa, ny fomba hambolena sy hikarakarana azy ireo. Ny andraikitry ny zavamaniry ao amin'ny farihy Tsy isalasalana, ny kolontsain'ny fitomboan'ny dobo dia mahatonga azy ho tsara tarehy, tany am-boalohany ary mbola velona.
Toerana mafana amin'ny tanany
Ny iray amin'ireo antony manan-danja amin'ny fiantombohan'ny famafazana, ary koa ny fivoarana sy ny fampiroboroboana ny zavamaniry nambolena, dia ny hafanan'ny tany misokatra. Amin'ny vanim-potoana iray, dia mety hahazoana telo na 4 heny ny vokatra azo avy amin'ny karazana zaridaina samihafa avy amin'ny faritra iray dia azo avy amin'ny farafara mafana, izay azo alamina amin'ny tananao manokana.
Fomba hahazoana fefy ho an'ny trano fonenana
Ny fantson-koditra vita amin'ny hoditra dia hevitra tsara ho an'ny tranon'ny firenena na trano fatoriana. Io fanorenana io dia manome ny maha-izy azy ny trano. Andeha hojerentsika ny fomba hanomanana ny fitaovana ho an'ny hgege ary ny fomba fanangonana azy. Ambany, ambany, na ambony? Amin'ny ankapobeny, ireo fefy matevina dia mizara ho karazana maro arakaraka ny tanjona.
Fomba entina mandevina ao amin'ny lakaly
Matetika, miatrika ny olana momba ny fitehirizana ny legioma sy ny vokatra hafa isika amin'ny ririnina. Ny toerana tsara indrindra dia ny vala, na izany aza, mba ahafahan'ny vokatra ao anatiny mandritra ny fotoana maharitra, dia ilaina ny manome ventilation mahomby. Amin'ity lahatsoratra ity dia hilaza izahay hoe ahoana no fomba fanaovana kapila ao amin'ny lakaly. Ahoana no iasany?
Stationary sy finday ho an'ny toeram-piompiana biby fiompy
Isan-taona dia mihamaro ny fitaovana ampiasain'ny tantsaha eo amin'ny sehatry ny fandraharahana. Mamolavola ny asa ny automation sy ny fanodinana asa amin'ny toeram-piompiana, manatsara ny fepetra amin'ny biby ary farany mampihena ny vidin'ny vokatra vokarina. Ireto fitaovana ireto dia ahitana mpaninjara sakafo.
Combine "Niva" SC-5: famerenana, ny toetra, ny fiantraikany ary ny fiantraikany
Ny fiara tsara indrindra amin'ny fiara mandritra ny fotoana dia lasa matanjaka miaraka amin'ny angano ary lasa karazana famantarana famantarana. Na izany aza, maro amin'izy ireo no miasa amim-pahombiazana ary mbola mamokatra. Anisan'ireny "lava lava" ireny ny hodinihintsika ato. Fantatsika izay mahavariana momba ny fitaovana nentin-drazana "Niva SK-5".
Ny fitsipika voajanahary momba ny fahazoan-dalana
Ny fisehoan'ny ankamaroan'ny zaridainan-javamaniry dia tsy miova mandritra ny taona - ny voankazo tsirairay dia manana ny toerany manokana, izay tsy mahomby velively. Ny teknolojian'ny fambolena sy fiompiana dia manome vokatra azo tsapain-tanana, nefa tsy midika fa ny fiovaovan'ny tany dia afaka miova, ary tokony hiova ireo zavamaniry ary hametraka azy ireo amin'ny "patch" kokoa.
Ny fomba fananganana fefy bbiby no manao izany
Hatramin'izao dia maro ireo fitaovana azo ampiasaina amin'ny fananganana rafitra samihafa toy ny fefy. Rehefa misafidy ny iray na ny iray hafa, dia matetika izy ireo no tarihin-dry zareo fa matanjaka izy io ary nanompo nandritra ny herintaona mahery. Ny tena zava-dehibe dia ny maha-tokana sy ny endrik'ilay fefy izay natsangana.
Ahoana no fomba anaovanao endri-tsoratry ny tanana miaraka amin'ny tananao?
Maro ny biby manana biby mahavariana ao amin'ny toeram-piompiany. Amin'ny tranga toy izany, misy ny olana goavana amin'ny fanodinana ny sakafo - misy ny fiankinan-doha amin'ireo "paroasy", ary matetika no vonona ny sakafo. Mba hanaovana izany, mila fitaovana ihany koa ianao, ary be dia be ny orinasa indostrialy. Fa mbola eo ny vahaolana - hanangona harafesina amin'ny tananao.
Ahoana ny fomba hanamboarana efitrano mafana ao amin'ny trano fivoahana: mikaroka fomba
Ny toetr'ireo faritra misy antsika dia toy izany hatrany lavitra any amin'ny faritry ny faritany rehetra izay mitrandraka amin'ny fotoanan'ny famolavolana ny zana-ketsa eny an-tany malalaka. Ny trano fonenana dia manampy ny zaridaina, saingy misy fepetra takiana amin'ny mari-pana ihany na dia ho an'ny tanimbilona aza. Mba hanatsarana ny dingan'ny fampirimana ny tany amin'ny alikaola polycarbonate ary hiarovana ny zana-ketsa amin'ny fiovaovan'ny hafanana be loatra, dia mety ny manamboatra fandriana tsara amin'ny fararano.
Ahoana no ahafahan'ny gilasy amin'ny tananao
Sarotra ny maka sary an-tsaina ny tenanao izay tsy nitsidika kebab fara-fahakeliny imbetsaka nandritra ny fotoana iray. Matetika ny saram-pitsaboana ho an'ny natiora dia sarotra amin'ny tsy fisian'ny singa fototra - ny brazier, izay mahatonga ny fanafihana toy izany matetika. Amin'ny farany, manapa-kevitra ny hanao famokarana amin'ny tananao manokana ianao, saingy tsy fantatrao hoe iza no tokony hofidiana sy ny toerana hanombohana.
Kruporushka (rushka) ho an'ny vary no manao izany
Ny katsaka dia manan-danja lehibe ho anisan'ny sakafo manan-danja ho an'ny olona sy ny biby, noho ny habetsahan'ireo sakafo mahavelona. Rehefa mitombo izany ho sakafo, dia ilaina ny manasaraka ny voankazo avy amin'ny cobs. Ity dingana ity dia mampalahelo. Noho izany, mba ho mora kokoa, dia afaka manamboatra kalsa manokana amin'ny tananao manokana ianao.
Ny efitranon'ny ondry: manao ahoana no atao amin'ny andian'ondry?
Ny fiompiana ondry dia misy ifandraisany amin'ny fizotran'ny andian'omby. Ny fikambanana araka ny tokony ho izy dia misy karazany maromaro. Ny efitrano izay hanamboarana ny fepetra rehetra ilaina amin'ny fitazonana ny ondry dia tsy mitovy amin'ny fanorenana azy avy amin'ny fandosirana mahazatra. Eto amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny fomba hanaovana ny alika iray ho an'ny alika - tranon'io biby mahavelona io.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Foto-drafitr'asa